ဘာကြောင့် ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာ လက်လီလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးကြီးရတာလဲ ? – Global POS & GOLD
အကယ်၍ မိတ်ဆွေဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်လာတဲ့ လက်လီအရောင်းဆိုင် ရဲ့ ပိုင်ရှင် ဒါမှမဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရသူ ဖြစ်နေရင်တော့ မိတ်ဆွေတာဝန်ယူရတဲ့ အပိုင်းတွေက များပြားလွန်းလှပါတယ် ။ ပစ္စည်းအမှာစာ လုပ်ရသူ ဟာလည်း ကိုယ်တိုင်၊ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေ ခေါ်ယူရတာကလည်း ကိုယ်တိုင် ၊ စာရင်းအင်းတွေ တွက်ချက်ရသူ ဟာလည်း ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီထဲမှာမှ ဝန်ထမ်းတွေကို လက်လီအရောင်းသင်တန်းထပ်ပေးရအုံးမယ် ဆိုရင်တော့ တော်တော့် ကို များသွား ပြီလို့ ထင်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ဒီအတွေးအမြင်ထက် မှားနိုင်တာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တန်းကောင်းကောင်း ရထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ရောင်းအားကောင်းကောင်း ကို ရရှိစေနိုင်လို့ ပါ။ဒီ Topic မှာမိတ်ဆွေကို လမ်းကြောင်းမှန် ပေါ်ကို တင်ပေးဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လို ထရိန်နင် (Training) ပေးရမယ်ကစလို့ သူတို့ ဆီက အကောင်းဆုံးရလာဒ် တွေကို ဘယ်လိုရအောင် လုပ်ရမယ် ဆိုတာတွေအထိ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
🔷 အရောင်းဝန်ထမ်း ထရိန်နင် (Training) ကဘာကြောင့် အရေး ကြီးတာလဲ?
အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင်ဟာ လက်လီဆိုင်သေးသေးလေးတွေထိ တောင်အရေးပါလှပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို မိမိတို့ ဆိုင်ရဲ့ ရောင်းသမျှ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် စေရုံသာမက လက်လီဆိုင်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပစ္စည်းခိုးခံရတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေကို ပါ လျော့ကျစေပြီး ရောင်းအားကောင်းစေနိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း တွေပါ ရစေချင်မှာပါ။ ဒီ Topic မှာ လက်လီအရောင်း ဝန်ထမ်းထရိန်နင်တွေကနေ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ဘယ်လို တိုးတက်စေနိုင်သလဲဆိုတာ ဥပမာတွေနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
အရောင်းဝန်ထမ်း ထရိန်နင်ကို ဘာကြောင့် လုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဆိုင်က ပစ္စည်းအသစ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို သိစေနိုင်ဖို့ ၊ ရောင်းပုံ ရောင်းနည်းစနစ် ကောင်းကောင်းတွေကို ပိုင်နိုင်စေချင်လို့၊ ပြီးတော့ ဘယ်လို customer မျိုး ကို ဘယ်လိုရောင်းရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့လူပေါ်ကိုလိုက်ပြီး အခြေအနေကိုသုံးသပ်တတ် စေချင်လို့ပါ။ ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ဝယ်သူကိုပျော် ရွှင် စေနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်သူတွေ ပျော်တယ်ဆိုရင် မိမိဆိုင်မှာ အမြဲတမ်းဖောက်သည်တွေဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အရေး ပို များသွားပါပြီ။
မိမိရဲ့ နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရခြင်း
ထိရောက်တဲ့ အရောင်းထရိန်နင် အစီအစဉ်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှု တွေဟာ မိတ်ဆွေကို ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်၊နှံ့ စပ်သိမြင်သူတစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုကြပါစို့၊ မိတ်ဆွေဟာ မိတ်ဆွေတို့ မြို့က စားသောက်ဆိုင်မှာ ကိုယ်တိုင်စပ် ဘီယာ ရောင်းတယ်ဆိုပါတော့။ အကယ်၍ သာ အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင် ကောင်းကောင်းသာ ရခဲ့ မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အရောင်းစာရင်းမှတ်တာတွေ၊ ပစ္စည်းပြန်မှာတာတွေအပြင် ကိုယ့်ရဲ့ customer ကို ဘယ် ဘီယာ အမျိုးအစား ဟာဖြင့် ဘယ်လိုဖော်စပ်ထားပြီး၊ ဘယ်အစားအစာ နဲ့ အကောင်းဆုံး တွဲဖက်စားသုံး နိုင်ကြောင်းတွေကိုပါ အကြုံပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဗဟုသုတတွေရှိတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေဟာ ဘီယာကို ဘဲ ရောင်းတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ခံစားမှု အတွေ့အကြုံ ကိုပါ ရောင်းတာဖြစ်သွားပါပြီ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဖောက်သည်တွေ ကိုယ်တိုင်စပ် ဘီယာတွေ မြည်းစမ်းချင်တိုင်း မိတ်ဆွေရဲ့ ဆိုင်ကို အမြဲသတိရနေစေမှာပါ။
အရောင်းဝန်ထမ်း ထရိန်နင်ကောင်းကောင်း ပေးထားစေခြင်းဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရဲ့ ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိစေပြီး လူကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာရော online မှာရော တသမတ်တည်းသော သတင်းကို ပေးနိုင်မှာပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ဝန်ထမ်းက တစ်နေရာမှာ တစ်မျိူးဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကိုထင်ရောင်ထင်မှားတွေ လုံးဝမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ မကြာခင်ပေးမယ့် ပရိုမိုးရှင်း ဈေးရောင်းပွဲတွေ နှင့်အခြားပွဲကို အသိပေးတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ စံနှုန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ တသမတ်တည်းဖြစ်နေစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိုက်ခြင်းဟာ မိတ်ဆွေဟာ မိတ်ဆွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့တက်လမ်း ၊တိုးတက်မှုတွေကို ဂရုစိုက်တဲ့သူအဖြစ် ပေါ်လွင်စေမှာပါ။ ဒီလိုဂရုစိုက်မှုတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်နိုင်လဲဆိုရင် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင် ပေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းလေးဟာ မိတ်ဆွေပိုင်တာဖြစ်ပေမယ့် ဝန်ထမ်းတော်တော်များများဟာ သူတို့ဘဝထက် ပိုပြီးကြီးမားကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပါဝင် ပတ်သတ်ချင်ကြပြီး တူညီတဲ့ဘုံအိမ်မက်တစ်ခုကို ရယူတဲ့အခါမှာ အရေးပါ အရာရောက်သူတွေ ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။အချိန်ပိုင်းအရောင်းအလုပ်တစ်ခုကို တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံ အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းငယ်လေးတွေကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ် ကြီးကြပ်နိုင်ခြင်းပါ။ ဒီတော့မိမိဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုမှာ ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါတယ်ဆိုတာ သိစေသင့်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်း ကောင်းလာတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေမြဲအောင် ပိုထိန်း ထား နိုင်မှာပါ။ ဒါဆိုရင် ဝန်ထမ်းအသစ်ရှာဖို့၊ ငှားဖို့၊ ထရိန်နင် ပြန်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ စရိတ်တွေကိုလျှော့ချစေနိုင် မှာပါ။ထရိန်နင်ကောင်းကောင်းမရတာဟာ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ထွက်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း နှစ်ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လက်လီအသေးစား အရောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝန်ထမ်းတိုင်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ တခြားအကြောင်းအရင်းအတွက် မဟုတ်ရင်တောင် ဝန်ထမ်းတွေပိုမြဲဖို့ဆိုတာ တစ်ခုနဲ့တင် အရောင်း ဝန်ထမ်းထရိန်နင်ကို ကောင်းကောင်း ပေးသင့်ပါတယ်။
ဘေးအန္တရာယ် ပိုမို ကင်းရှင်းစေခြင်း
မိတ်ဆွေဟာ စတိုးဆိုင်အသေး တစ်ခုကိုဖြစ်စေ၊စာအုပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို ပိုင်တာဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဖောက်သည်တွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ်ချရမှု ဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်လာပါပြီ။ လေးလံတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အထုတ်အပိုးတွေကို ဘယ်လိုဘေးကင်းအောင် သယ်ယူရမယ်ဆိုတာ သင်ကြားပြသပေးရခြင်းတွေ၊ ဖောက်သည်တွေ ခလုတ်မတိုက် ချော်မလဲအောင် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုခင်းကျင်းပြသရမလဲ ဆိုတာတွေ သင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေရဲ့ တာဝန်ကို ပေါ့သွားစေနိုင်ပြီး ၊ အန္တရာယ်ကင်းကင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။ အခြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ထွက်လမ်း ပိတ်တာတွေ၊ စတိုခန်းထဲမှာ ကောင်းကောင်းမသိုလှောင်တာတွေနဲ့မစင်အညစ်အကြေးတွေကိုပါ သတိထားရမှာပါ။ အနည်းဆုံးတော့ အခြေခံအလုပ်ခွင်အန္တရာယ်နဲ့ဘယ်လိုဘေးကင်းအောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကိုတော့ ဝန်ထမ်းတိုင်းသိအောင်လုပ်ရမှာပါ။
🔷 အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ ?
ထရိန်နင်ကောင်းကောင်း တစ်ခုကိုပြင်ဆင်တာဟာ အမြဲတမ်း အချိန်ကုန် အလုပ်ရှုပ်ပြီး ခက်ခဲရမယ်လို့မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့စိုက်ထုတ်လိုက်ရတဲ့ အရင်းအနှီးအတွက် အတန်ဆုံးဖြစ်အောင် အောက်ပါအောင်မြင်ပြီးသား အကြံဉာဏ်လေးတွေကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ထရိန်နင်ကို အပိုင်းလိုက်ခွဲလိုက်ချင်းဟာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လေ့လာမှတ်သားဖို့ပိုလွယ်သွားပြီး ကိုယ်သင်ယူနိုင်နဲတဲ့ နှုန်းနဲ့ကိုယ်အဆင်ပြေပြေလေ့လာနိုင်စေမှာပါ။ တစ်ချို့က တစ်ခါသင်ပြရုံနဲ့ တန်းပြီး နားလည်တာရှိသလို၊ တစ်ချို့ကျတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင် အားချိန်လေးမှာ ပြန်ပြီးဖတ်ရှု့မှတ်သားမှုလုပ်ပြီးမှ သေချာနားလည်သွားနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ အပိုင်းလိုက် ခွဲလိုက်တော့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သင်ယူလေ့လာတတ်သလဲဆိုတာကိုပါ မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဝန်ထမ်းတွေနဲစကားပြောကြည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစနည်းနာပြီး ကိုယ်ရဲ့သင်ရိုးကို ပိုပြီးလိုက်ဖက်ညီအောင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ကပြောခဲ့သလို အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး ပေးတဲ့အပြင် နောက်တစ်ချက်ကတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းက လေ့လာသင်ယူမှု ပုံစံမတူကြပါဘူး။ တစ်ချို့က လက်တွေ့လုပ်ရတာကြိုက်တယ်။ တစ်ချို့က ဖတ်ရှုမှတ်သားခြင်းဖြင့် လေ့လာချင်ကြတယ်။ ဒီတော့ထရိန်နင်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါင်းစပ်သင်ကြားခြင်းဖြင့် အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင်ကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်တဲ့အပြင် အဖွဲ့ထဲမှာ ရှိတဲ့လူတိုင်းက သင်ကြားပေးတဲ့ အချက်အလက်အားလုံးကိုအလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်မှာပါ။
ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေကို အပြောင်းအလဲလုပ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်သလဲနဲ့ ဘယ်အချိန်တွေမှာတော့ သံမဏိစည်းကမ်း အတိုင်းလိုက်နာသင့်သလဲဆိုတာကို သေချာသဘောပေါက်နားလည်စေခြင်း
Customer တွေရဲ့ပြဿနာတွေ၊ ကွန်ပလိန်းတက်တာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပေးလိုက်ခြင်းဟာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Customer ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးတက်စေပြီး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာပိုင်းကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့စည်းကမ်းတွေကိုတော့ အကြောင်းပြချက်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း စည်းကမ်းကနေ မသွေဖယ်သင့်ပါဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ စတိုးဆိုင်ရဲ့ ပစ္စည်းပြန်လဲခွင့်ပေါ်လစီကို အပြောင်းအလဲ လုပ်ခွင့်ပေး ထားတာမျိုး။ တစ်ချို့စတိုးဆိုင်တွေအနေနဲ့ ပြန်လဲခွင့်ကို ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတာမျိုးပါ။ မန်နေဂျာကို မေးစရာမလိုဘဲ ဘယ်လိုအနေအထားဆိုရင် လက်ခံပြီး၊ ဘယ်လိုအချိန်ဆိုရင် လက်မခံဘူးဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ခိုင်းလိုက်တာမျိုးပါ။နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မဖောက်ဖျက်သင့်တဲ့ စည်းကမ်းကတော့ ပြန်လဲနိုင်တဲ့ရက်ကို ရက်(၉၀)အတွင်း သတ်မှတ်ထားတာမျိုးပါ။ ပိုပြီးတိကျသေချာအောင် ဒီစည်းကမ်းတွေကို စာရွက်မှာချရေးထားပြီး အမြဲတသမတ်တည်းဖြစ်အာင် မြင်သာတဲ့နေရာမှာကပ်ထား သင့်ပါတယ်။ ဒါမှဝန်ထမ်းတွေအချိန်မရွေးလွယ်လင့်တကူတွေ့မြင်နိုင်အောင်ပါ။
အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင်ဆိုတာ အမြဲမပြတ်လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဆိုတာကို သတိရပါ
ဝန်ထမ်းအသစ်ကိုခေါ်မှ ထရိန်နင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အမြဲသတိရသင့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ၊လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေ၊ကုန်လက်ကျန်တွေဆိုတာ အမြဲပြောင်းလဲနေမှာပါ။ ဥပမာဆိုရင် ထရိန်နင် အနည်းဆုံးပေးရတယ်ဆိုတဲ့ အရောင်း POSစနစ်တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ ရာသီလိုက်အရောင်းထရိန်နင်၊ ဘေးအန္တရယ်ကာကွယ်ရေးထရိန်နင်၊ ပေါ်လစီထရိန်နင်စတဲ့ စရိန်နင်များပေးလိုက်ခြင်းဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ စစချင်းထရိန်နင်မှာ သင်ယူမှတ်သားခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေရုံသာမက ဝန်ထမ်းတိုင်းကို တူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရရှိဖို့သေချာစေမှာပါ။
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လေ့လာသင်ယူတဲ့ပုံစံကို သုံးသပ်ခြင်းနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြောင်းလဲပေးခြင်း
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သင်ယူတဲ့ပုံစံ သင်ယူတဲ့နှုန်းတွေ ကွဲပြားကြပါတယ်။ ဒီတော့မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ဘဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ယူမှုပုံစံ ဆင်တူတွေ များနေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင် အစီအစဉ်မဆွဲခင် ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မှတ်သားမှုပုံစံကို အရင်လေ့လာသုံးသပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ သူများရဲ့ အဆိုအရ သင်ယူမှုပုံစံအဓိက(၃)မျိုးရှိပါတယ်။ နားထောင်ခြင်းဖြင့် လေ့လာသူများ၊ အမြင်ဖြင့် လေ့လာသူများနဲ့ လက်တွေ့လေ့လာသူများဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ နားထောင်စွမ်းရည်ဖြင့် လေ့လာသူများကတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို နားထောင်လိုက်တာဟာ သူတို့အတွက် ပိုမိုသဘောပေါက်လွယ်စေပါတယ်။ အမြင်ဖြင့်လေ့လာသူတွေကတော့ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကဖတ်ရှုခြင်းက သူတို့အတွက်ပိုမိုသိလွယ်မြင်လွယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ လက်တွေ့လေ့လာသူများကတော့ပါးစပ်ဖြင့်ပြောခြင်းထက် လက်တွေ့ထိတွေ့ပါဝင်လှုပ်ရှားလိုက်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ကာကွယ်ရေး အသိပေးထရိန်နင်မှာပစ္စည်းသေတ္တာပုံး တွေကိုလက်တွေ့ မပြခြင်းဖြင့်သင်ကြားခြင်းက ဘယ်လို မ ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြနေတာထက် ပိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ရှေးရိုးအတိုင်း စာသင်ခန်းပုံစံနဲ့ သင်ကြားခြင်းကနေ အလုပ်ခွင်မှာလက်တွေ့ ဆင်းတာတွေအထိ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးထရိန်နင်နည်းလမ်းတွေ အမျိုးစုံလှပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်အစား ကွန်ပြူတာကနေ သင်ခန်းစာတွေလုပ်ပေးပြီး ဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ အဆင်ပြေဆုံး အချိန်မှာ သင်ယူလေ့လာလို့ရအောင်လဲ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အပြုအမူပေါ်မူတည်သော သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ဟာ အခုနောက်ပိုင်းပိုပြီးကျော်ကြား လူသိများလာတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထရိန်နင်တွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အပြုအမှုတွေကို ဖယ်ရှားဖို့အထောက်အကူပြုရာမှာဖြစ်စေ၊ ကျင့်ဝတ်ရေးရာ အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေ ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကိုABC နည်းလမ်းလို့လဲ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူဟာယခင်ဖြစ်ပျက်စဉ်တွေ၊ အပြုအမှုတွေနဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်တွေကို အဓိကထားကြည့်ပါတယ်။ ယခင်ဖြစ်ပျက်စဉ်ဆိုတာဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို အပြုအမှုတစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်မိအောင် လံှု့ဆော်နေတဲ့ အရာအားလုံးတွေကိုပြောပါတယ်။ ဒါဟာလူတွေ၊ နေရာတွေ ၊အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ အကြံဉာဏ်တွေပါ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ အခြားဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ပြုမူနေထိုင်တဲ့ ပုံစံကိုတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးတာမျိုး သို့မဟုတ်သူဟာ ယခင်ကCustomer တစ်ယောက်ကဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆက်ဆံခြင်းကို ခံခဲ့ရတာမျိုးစတဲ့ မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရှိနေနိုင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သုံးတဲ့ အပြုအမှုဆိုတာ မြင်တွေ့ရတဲ့လက်တွေ့ကိုပြောတာပါ။ စိတ်ကူးတွေ အကြံဉာဏ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်ဆိုတာ အမူအကျင့်တွေရဲ့ ဆုလာဒ်တွေလဲ ဖြစ်နိုင်သလို၊ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခြင်း တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆုလာဒ်တွေ၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းတွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ဆီကနေ လုပ်ငန်းတွေက မျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြားအရာတွေကိုသိသော်ငြားလည်း ဆန့်ကျင်ဘက်တွေသာ သိသိကြီးနဲ့ ပြုလုပ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ်လိုတဲ့ပုံစံသွင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယခင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အခါမျိုး၊ အလုပ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေကို နည်းပြလုပ်ပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လက်လီအရောင်းဆိုင်ကြီးကြီးသေးသေး အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေဟာ အခြားဝန်ထမ်းတွေထက် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ပိုပြီအားသန်တာ (အားနည်းတာ)မျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဝန်ထမ်းတိုင်းရဲ့ အလားအလာကောင်းတွေကို အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ဖို့ အတွက် တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ အခက်အခဲတွေကြုံနေရလဲ ဆိုတာတွေကို အချိန်ပေးပြီး သိအောင် အရင်ဖော်ထုတ်ရပါမယ်။ ပြီးရင်သူတို့ကို ကူညီနိုင်မဲ့ထရိန်နင် အစီအစဉ်တွေကိုပေးသင့်ပါတယ်။
အဖွဲ့ထဲမှ ထူးချွန်သူတွေနဲ့ အားနည်းသူတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။
မိမိရဲ့ထူးချွန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာရောင်းအားအကောင်းဆုံးတွေကိုဘဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် တကယ့်ထူးချွန်သူတွေဆိုတာ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ် ကောင်းမွန်ပြီးလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူ တွေကိုညွှန်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ အထူးစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပြီး တိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးရှာနေသူ အကြံဉာဏ်ကောင်းများပေးသူတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဆိုတာဟာ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးသူတွေနဲ့ အသေးစိတ်ကြီးကြပ်ပေးဖို့ မလိုသူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လိုဘဲ ဝန်ထမ်းကောင်းဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုပါစေ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေကိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူမှုရှိနေအောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။မိတ်ဆွေထင်နေသလို အင်မတန်မှ တော်လွန်းလှတဲ့ ဝန်ထမ်းဆွေအများကြီး ရှိခြင်းဆိုတာဟာလည်း တကယ့်စံယူထိုက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးသိပ်မဟုတ်လှပါဘူး။ ပိုလို့တောင် ဆန့်ကျင်နေပါသေးတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်သူ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ လေ့လာချက်အရ ထိပ်တန်းရောက်ဝန်ထမ်းတွေ အများကြီး ရှိခြင်းဟာ လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံတွေ အမျိုးမျိုးကွဲစေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေတောင်မှ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါဟာ ခေါင်းဆောင်တွေအများစုကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကို လုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထိကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိတ်ဆွေရဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာ ဝန်ထမ်းအားလုံး ထိပ်ဆုံးရောက်နေသူတွေမဟုတ်လို့ စိတ်ပူမနေပါနဲ့။ စွမ်းဆောင်ရည် ထိပ်တန်းရောက်သူတွေဟာ ဘယ်အရောင်းဆိုင်အဖွဲ့အစည်းမှာမဆိုပေါ်လွင်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရောင်းအားသတ်မှတ်ချက်တွေ ကျော်လွန်ရုံသာမကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုလေးစားတန်ဘိုးထား တတ်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုပြီးမြောက်အောင် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်တတ်တယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းလဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ သို့မဟုတ် အလားအလာကောင်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကောင်းမွန်တဲ့ လက်လီအရောင်းစနစ် (POS) တွေကနေရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်းစာရင်းတွေကနေ ဘယ်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဖြင့် အရမ်းကိုထူးချွန်နေပြီး ဘယ်သူတွေကတော့ဖြင့် ထရိန်နင်အနည်းငယ်လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာတွေကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ရီပို့၊ transaction report တွေ၊ အချိန်ပိုင်းရီပို့ (Shift report) တွေကို ကြည့်ပြီးပြောနိုင်ပါသည်။စံချိန်မှီ အရောင်းစနစ် (POS)တစ်ခုက မိတ်ဆွေအတွက် နာရီပိုင်းအလိုက် ရောင်းအား၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ရောင်းအားတွေပြသနိုင်တဲ့ Reports တွေကိုပါ ထုတ်ပေးနိုင်ရပါမည်။
မိမိတို့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအလားအလာကို ရရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
မိမိတို့ ဝန်ထမ်းတွေဆီကနေအကောင်းဆုံးရလာဒ်တွေရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေဆီက ဘာမျှော်လင့်တယ်ဆိုတာ အသိပေးခြင်း၊ သူတို့ကိုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်အောင် ကူညီခြင်းနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ဖောက်သည်တွေနဲ့ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ပြီးရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်အောင် ကူညီပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကူညီပေးခြင်းဟာ မိမိတို့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး အရည်အသွေးမြင့်တက်အောင်ကူညီပေးခြင်းအပြင်၊ဖောက်သည်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုခန့်မှန်းနိုင် လာပြီး ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေတိုးတက်လာအောင် ကူညီခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်း ထရိန်နင်တွေကို ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ဒီအရည်အချင်းတွေ တိုးတက်အောင် ကူညီပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။ DISC modelဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင်အဖြစ် သုံးလို့ကောင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ့်အရည်ကိုယ်သွေးအလိုက် (၄)မျိုး ခွဲပေးပါလိမ့်မယ်။ 🔷“D” ဆိုတာကတော့ dominant လွှမ်းမိုးချင်သူ၊ ရလာဒ်ကို ဇောင်းပေးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ 🔷“I” ကတော့ “motivated by incentive” ဆုလာဒ် တစ်ခုခုကို ရလိုတာကြောင့် စိတ်ခွန်အားတက်ကြွသူတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ 🔷“S” ကတော့ “calm and steady” တည်ငြိမ်အေးဆေးသူတွေဖြစ်ပြီး မိသားစု၊ မိတ်တွေကို ခုံမင်တွယ်တာသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ 🔷 “C” ကတော့ “detail oriented & conscientious” အသေးစိတ်ပြီးအလုပ်ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရင်စိတ်အားထက်သန်တက်ကြွ မယ်ဆိုတာသိထားရင် အောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဆုလာဒ်တွေ၊ တွန်းအားပေးတာတွေ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာပါ။
🔷 ဝန်ထမ်းတွေကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပါးပါးနပ်နပ်နဲ့လုပ်ဆောင်ကြမလဲ ?
တခါတစ်ရံမှာဘယ်လောက်ဘဲအရောင်းထရိန်နင်ကောင်းတွေပေးထားပါစေ၊ ဘယ်လောက်ဘဲစိတ်ခွန်အား တက်ကြွအောင် လုပ်ထားပါစေ၊ တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ထမ်းဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေသေသေချာချာမလိုက်နာတာဖြစ်နိုင်သလို၊ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ ဖောက်သည်တွေနဲ့ အခြား ဝန်ထမ်းတွေ မလေးမစား ဆက်ဆံခြင်း၊ အနှောက်အယှက်ပေးခြင်း စတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူမျိုး တွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ မိမိရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အလုပ်ကို ခွဲထားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ အစကနေကြိုးစားတည်ဆောက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်း(၁)ခုကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်တဲ့အခါမှာ မိတ်တွေ ဒေါသထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဒေါသထွက်လိုက်ခြင်းဟာ မိမိရဲ့ ဝန်ထမ်းနဲ့ ပိုပြီးတစိမ်းဆန်စေပြီး အခြေအနေကို ပိုဆိုးရွားစေမှာပါ။ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ သမာသမတ်ကျကျလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်၊ ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရာမှာ အောက်ပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့် ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကို တာဝန်ယူစိတ်ရှိတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံခြင်း ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးလူကြီးအများစုဟာ တာဝန်ယူမှုရှိပြီး၊ သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကိုသူတို့မျက်စိထဲမှာ မြင်သာလာအောင် လုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားတဲ့ အပြုအမူတွေ ကိုပြောင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာကို ခေါင်းအေးအေးထားရှင်းပြပြီး၊လိုအပ်တဲ့ ထရိန်နင်တွေထပ်မံပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
ခြိမ်းခြောက်တဲ့စကားတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ
စာနဲ့သတိပေးတာတွေ၊ အလုပ်ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တာတွေနဲ့ အခြားအလားတူ လုပ်ရပ် တွေဟာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုခြိမ်းခြောက်တယ်လို့ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။အလုပ်ထုတ်ခံရနိုင်ခြင်းမှကြောက်ရွံ့စိတ် ဝင်ပြီးအလုပ်မှာ တက်ကြွမှုမရှိ ဖြစ်သွားစေ နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာဒီလိုသတိပေးမှုတွေလိုအပ်တဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေခိုးတာ၊ ပိုက်ဆံခိုးတာတွေရှိနိုင်ပေမယ့် ပထမဦးဆုံးကျူးလွန်မိတဲ့အသေးစား အမှားတွေကိုတော့ဒီလိုခြိမ်းခြောက်တာတွေလုပ်တာဟာကောင်းကျိုးကိုသိပ်မဖြစ်ထွန်းစေတတ်ပါဘူး။
စာနဲ့ သတိပေးတာတွေ၊အလုပ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ဆွေးနွေးတာတွေထက်စာရင် အဲ့ဒီဝန်ထမ်းရဲ့ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာတွေကနေ ဒီလိုမလိုလားအပ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖြစ်စေသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အရင်ရှာသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ-ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကို ငြင်းဆိုခံရမှာကိုကြောက်တဲ့ အတွက်ဖောက်သည်ကိုသွားမရောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီတော့သူရဲ့ရောင်းအားတွေကသတ်မှတ်ထားတာတွေ ထက်လျော့နည်းနေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အရင်ဆုံး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်မဲ့အစား ဝန်ထမ်းနဲ့ တစ်ဦးချင်း အချိန်ယူပြီး စကားပြောကြည့်သင့်ပါတယ်။ သူတိုရဲ့ အပြုအမူတွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရိုးရှင်းတဲ့ အဖြေတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းတွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေရဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းတွေဟာ လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေရဲ့အသက်သွေးကြောပါ။ ဘယ်လောက်ဘဲ ပစ္စည်းကောင်းကောင်း၊ ကြော်ငြာတွေကောင်းကောင်း၊ ဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းပြီး ပုဂ္ဂလဆန်တဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေသာ မရှိရင် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ရဲ့ ရောင်းအားတွေကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းနေစေချင်ရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ၊ အရောင်းဝန်ထမ်းထရိန်နင်တွေကို လိုအပ်သလို ပံ့ပိုးပေးရပါမယ်။